အဂတိလိုက်စားသူများအတွက် သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးသံ – ရွှေလရောင်
ကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုပြီး မလာစေချင်ပါ
အဖျားလုံးဝမကျဘဲ ကလေးမှိန်းနေပြီး ကော်ဖီရောင်အန်ခြင်း၊ ဝမ်းအမည်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးပြရန် လို
slyadmin May 17, 2018
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အာဏာရှင်လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံအဘက်ဘက်က နိမ့်ကျယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ ထိုသို့ ပျက်စီးမှုထဲမှာမှအဆိုးဆုံးက ကျွန်တော် တို့ပြည်သူအများစုရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ယိုယွင်းပျက်စီးကုန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူဆိုတဲ့နေရာမှာ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အရာဝတ္ထုပျက်စီးမှုတွေက ပြန်ပြင်လို့၊ ပြန်ရှာလို့လွယ်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးမှုက ပြင်ရတာ အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှု ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ယနေ့အထိ နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ နိုင်ငံမှာ အဆင့် ၁၃၀ ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ခုထိ အနီရောင်အဆင့်ထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါတောင် လျော့ကျသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအလယ်မှာ အတော်ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှက်ရကောင်းမှန်း မသိကြသေးပါဘူး။ မသိလို့လည်း ဒီနေ့အထိ အဂတိလိုက်စားမှုအဆိုးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါနေဆဲဖြစ်နေတာပေါ့။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုဟာ အချိန်ကြာလာတော့ ရှက်စရာလို့တောင်မမြင်ဘဲ အားကျစရာအဖြစ်တောင် ယနေ့ပြည်သူအများစုက မြင်လာတဲ့အထိ အခြေအနေက ဆိုးလာခဲ့တယ်။ အမှားဟာအချိန်ကြာလာတော့ အမှန်လို့ထင်မြင်လာကြတယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ်စဉ်းစားကြည့် ဒီနေ့ လူငယ်တယောက်အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဌာနမှာ ၀င်ချင်ကြလဲဆိုတာအဖြေပါပဲ။ လာဘ်ငွေဘေး ပေါက်အများဆုံးရတဲ့ဌာနကို ၀င်ချင်ကြတာပဲ။ ကျောင်းဆရာလုပ်မလား၊ အကောက်အခွန်ဌာနတို့ လ၀ကတို့ မှာ လုပ်မလားဆိုရင် ဘယ်မှာလုပ်ချင်တယ်လို့ဖြေမလဲ။ အဲဒီလို လာဘ်ငွေအများအပြားရတဲ့ဌာနကို နေရာရဖို့အတွက် ငွေသိန်းပေါင်းများစွာပေးပြီးတောင် ၀င်ကြရတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလို အကျင့် ပျက်လာဘ်စားဖို့ကို အရှက်အကြောက်ရှိဖို့ နေနေသာသာ အားကျစရာအဖြစ်တောင် မြင်လာတဲ့လူမှု အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာကြတာဟာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးစရာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီနေ့ မိဘကလည်း ငါ့သားသမီးမဟုတ်တာလုပ်ပြီး ငွေရှာနေကြတာကို ဂုဏ်ယူတယ်၊ သူတို့ရှာတာကို စားဝံ့တယ်။ သြော် . . . ငါ့သားသမီးလေး ဒါမျိုးလုပ်တာ မကောင်းဘူးဆိုပြီးမတားတဲ့အပြင် အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ အတွက်ကို တွန်းပို့ပေးကြတယ်။ သားသမီးတွေကလည်း ငါ့မိဘက ဘယ်လိုဌာနက ဘယ်လိုရာထူးကြီး ဘယ်လို ၀င်ငွေကောင်းတာဆိုပြီး ဂုဏ်ယူကြတယ်။ ငါ့မိဘက မဟုတ်တာလုပ်နေတာဆိုပြီး ဘယ်သားသမီးမှ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကပါ လေးစားအားကျနေတော့ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ စဉ်းစားကြည့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ဓာတ်တွေ ပျက်ပြားနေကြပြီလဲဆိုတာ။ မဟုတ်တာ၊ မမှန်တာ လုပ်ရမှာကို ရှက်ရ၊ ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိတော့ဘူး။
ယနေ့တိုင်းပြည်အဘက်ဘက်က နိမ့်ကျပျက်စီး နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်ထဲမှာ ဒီအဂတိလိုက်စား မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့အရပ်သားဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာအမြစ် တွယ်နေတဲ့အကျင့်ဆိုး၊ စရိုက်ဆိုးကြီးကို စတင်တိုက်ဖျက်တော့မယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတယ်။ သမ္မတ သစ်ဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်မှာပဲ ပထမဆုံးအကြီးဆုံး ငါးတကောင်ကို ဖမ်းပြလိုက်ပြီ။ ညွှန်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ လူကြီးတယောက်ကို အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ တရားစွဲအရေးယူလိုက်ပါပြီ။ ညွှန်ချုပ်ဆိုတဲ့အဆင့်က သူ့အထက် ၀န်ကြီးပဲ ရှိတော့တာပါ။ ဒါမျိုးအရေးယူပြမှုကို ကြိုဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၄ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်း တရားလွှတ်တော်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ညွှန်ချုပ်ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ ရုံးထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ထိုညွှန်ချုပ်ဆိုတဲ့အရာရှိကို လက်ထိတ်ခတ်ပြီး ရှေ့ကရဲက သံကြိုးဆွဲပြီးခေါ်လာတယ်။ မီဒီယာတွေကလည်း ဓာတ်ပုံတဖျပ်တဖျပ်ရိုက်ကြတယ်။ ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ် တရားရမိတယ်။ သြော် . . . တချိန်က ဘုရင်အလား အခြွေအရံတွေနဲ့ နေခဲ့တဲ့ အရာရှိတယောက်က ခုတော့ လက်ထိတ်ကြီးနဲ့ သံကြိုးဆွဲခေါ်ခံရတဲ့အဆင့် ဖြစ်သွားပြီ။ နောက်နေ့ထွက် သတင်းမီဒီယာများမှာလည်း မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ်ပါလာကြတယ်။ ယခု လိုပုံစံမျိုးပဲ ပြီးခဲ့တဲ့လ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ကလည်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဒုဦးစီးမှူးတို့ကို အဂတိလိုက်စားမှုနှစ်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ အမိန့်ချခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။
နိုင်ငံတကာမှာကြည့်ရင်လည်း တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ဂွမ်ဟီးကို အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂၄ နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့အတူ ဖိလစ်ပိုင်မှ သမ္မတအာယိုယို၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရင်လတ်တို့ဟာလည်း အဂတိလိုက်စားမှုများနဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားကြရပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ဂွမ်ဟီးဆိုရင် နေချင်းညချင်း သမ္မတဘ၀မှ လက်ထိတ်နဲ့ တရားခံဘ၀ရောက်သွားပြီး သမ္မတအိမ်တော်ကနေ ဆင်းပေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်း၊ သူ့နိုင်ငံသားတွေမှ ချက်ချင်းနုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့မြင်ကွင်း၊ ရုံးထုတ် လာတဲ့မြင်ကွင်းတွေက တရားကျစရာမြင်ကွင်းတွေပါပဲ။
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ခုလိုအရာရှိအရာခံကြီးတွေဘ၀ကနေ ချက်ချင်းတရားခံဘ၀ရောက်ရှိ သွားရတာ သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်ရှက်လိုက်မလဲ။ တရားခံရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ ကိုယ့်ဖအေ တယောက် ဒါမျိုးလက်ထိတ်ကြီးနဲ့ သံကြိုးဆွဲခေါ်သွား တာကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်ရင်ထုမနာ ခံစားလိုက်ကြရမလဲ။
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရော ဘယ်လောက်အရှက်တရားရကြမလဲ။ အဂတိလိုက်စားတုန်းကတော့ ကိုယ့် မိသားစုကောင်းစားရေး ကိုယ်ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်ပါ။ ခုခံကြရတော့ ဘယ်သူမှ လာကယ်ပေးလို့ မရတော့ဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်း ၀င်ခံပေးလို့ မရကြတော့ဘူး။ ခံစရာရှိတော့ ကိုယ်တယောက်တည်း ခါးစည်းခံကြရတော့မှာပါ။ ဒါကလက်ရှိဘ၀မှာခံရတာ မစားသင့်တာစား၊ မလုပ်သင့်တာလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် လည်း သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သံသရာတလျှောက်ခံကြရဦးမယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ် ကြောက်စရာကြီးပါ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ ပြည်သူတွေရော အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေရော သင်ခန်းစာယူကြရပါမယ်။ ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်တခု ပြောပြပါဦးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲက ၀န်ကြီးဌာနတခုရဲ့ ခရိုင်အဆင့်လူကြီးအပါ အ၀င် ၀န်ထမ်းများက တင်ဒါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မမှန်မကန်လုပ်တယ်။ ဒါကိုခံရတဲ့သူတွေက မကျေနပ်လို့ ကျွန်တော့်ဆီလာအကူအညီတောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးဆီတိုင်ကြားခိုင်းလိုက်တယ်။ နေပြည်တော်က စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့စေလွှတ်ပြီး စစ်ဆေးခိုင်းတော့ ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မဟုတ်တာလုပ်တာပေါ်ခဲ့တယ်။ အနည်းဆုံးအလုပ်ပြုတ်နဲ့ အများဆုံးထောင်ကျတဲ့အထိ ခံကြရတော့မယ်။ ဒီအချိန်မှာ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများဆီ အတင်းလာရောက်တောင်း ပန်ကြတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေကို သနားဖို့၊ တချို့ကလည်း ပင်စင်နီးပြီ ပင်စင်ယူရင်ထုတ်ရမယ့် ပင်စင် ချီးမြှင့်ငွေလေးနဲ့ အိမ်ဆောက်ရမှာမို့လို့ မလုပ်ပါနဲ့ အတင်းတောင်းပန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေများက သနားပြီး ကျေအေးကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးလိုကရတယ်။
အဲတော့ဗျာ မလုပ်ခင်မှာ ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘာလို့မစဉ်းစားကြတာလဲ။ သူများတွေလည်း မဟုတ်တာလုပ် နေကြတာပဲကွာ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုပြီး ပြောလို့မရပါဘူး။ သူများ ၁၀ ခါအမှားလုပ်လို့ ဘာမှဖြစ် ချင်မှဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ်တခါလုပ်မိတဲ့ အမှားလေးကလည်း ခုလိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ဆိုတာ သတိထားရပါမယ်။ ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ အဖေလည်း ကယ်လို့မရ၊ အမေလည်း ကယ်လို့မရ၊ သားသမီးလည်း ကယ်လို့မရပါဘူး။ တကယ်ဖြစ်တော့ ကိုတယောက်တည်းခံရတာ။ အသက်ကြီးလို့ ဘုရားတရားလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်သွားကြရတော့မယ်။
ဒါမျိုးတွေဖြစ်မလာဖို့အတွက် အစကတည်းက မိဘများအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးဟာ တရားဝင်ပေးတဲ့ လစာထက်ပိုရနေတယ်ဆိုရင် မလုပ်ဖို့သတိပေးရမယ်။ ငါ့သား ငါ့သမီး မဟုတ်တာ၊ မမှန်တာလုပ်ပြီး ရှာကျွေးတဲ့ထမင်းတော့ ငါတို့မစားချင်ဘူးဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရမယ်။ သားသမီးတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်မိဘက မဟုတ်တာလုပ်နေတယ်ဆိုရင် အဖေ၊ အမေ မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ သားတို့၊ သမီးတို့ကို ရှာမကျွေးပါနဲ့ သမီးတို့ထမင်းကို ဆားနဲ့ပဲစားရစားရ စားပါ့မယ်။ ခုသူများတွေအဖမ်းခံရတာကြည့်ပါ၊ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲ၊ အဖေ၊ အမေတို့အတွက် လက်ရှိဘ၀မှာလည်း မကောင်းသလို သံသရာ မှာလည်း မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား တားမြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှကိုယ့်မိဘ ကိုယ့်သားသမီးကို တကယ်ချစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရမှာပါ။ ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်မိဘမဟုတ်တာလုပ်ပြီး ငွေရှာနေတုန်းကတော့ တားမြစ်ရကောင်းမှန်းမသိ ပျော်ပျော်ပါးပါးစားသောက်ကြပြီးတော့ ပြဿနာဖြစ် လက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့ အဖမ်းခံရတော့မှ ရှက်လှပါပြီ မလုပ်ကြပါနဲ့။ နောင်တ မရကြပါနဲ့။
မိဘမဟုတ်တာလုပ်ရင် ကိုယ်တင်မက သားသမီးမြေးမြစ်တွေအတွက် ခံရတယ်ဆိုတာ ဂဠုန်ဦးစော အဖြစ်အပျက်က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာကြီးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့အာဏာမက်မောမှု ကြောင့် မြန်မာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးကို သတ်လိုက်တဲ့အကျိုးဆက်က ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစင် တက်ခဲ့ရသလို ကိုယ်ရဲ့သားသမီးတွေသာမက သားသမီးတွေက မွေးလာတဲ့မြေးမြစ်တွေအထိ အာဇာနည် နေ့ဆို ကျောင်းမတက်ရဲအောင်အထိ သမိုင်းတလျှောက် အကျိုးဆက်က ကြောက်စရာပါ။
ထို့အတူ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အသက်စွန့်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အကျိုးတရားဟာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတော့ ယနေ့အထိ အာဇာနည်နေ့တိုင်း တတိုင်းပြည်လုံးက အလေးပြုနေရဆဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိသရွေ့ သူတို့ဟာ ရှင်သန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေဟာလည်း ကိုယ့်ဖခင် ကိုယ့်အဖိုးရဲ့ကောင်းမွန် မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ဘယ်လောက်ခံစားနေကြရလဲဆိုတာ မြင်တွေ့ကြမှာပါ။ တနိုင်ငံလုံးကချစ်ခင်လေးစားကြပြီး အများအလယ်မှာ ကိုယ့်မိဘလုပ်ရပ်ကြောင့် ခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင်ခဲ့ ကြတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမျိုးဆက်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေချန်ခဲ့ကြမှာလဲ။ ငါ့မိဘက ဘယ်လိုကွဆိုပြီး လူပုံအလယ်မှာ လက်မထောင်နိုင်စေချင်လား။ ကိုယ့်မိဘ အဘိုးအဘွားလုပ်ရပ်ကြောင့် လူ့လောကအလယ်မှာ ခေါင်းမဖော်ရဲအောင် ဖြစ်စေချင်သလား ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ တကယ်ဖြစ်လာရင် တရားဥပဒေကရော၊ ကံတရားကရော၊ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကပါ ခွင့်မလွှတ်ဘူး၊ မသနားကြဘူးဆိုတာ ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့အမှုတွေက သက်သေပါပဲ။ ရာထူးအာဏာရှိချိန်မှာတော့ ပြည်သူကိုလည်း မငဲ့ကွက်၊ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာလည်း မကြည့်၊ ငါ့အတွက်၊ ငါ့မိသားစုအတွက်၊ ငါ့ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် အကျိုးတခုတည်းကြည့် ထင်ရာ စိုင်းလုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြသူတွေ အထူးသတိထားကြပါ။
ရာထူး အာဏာ စည်းစိမ်ဆိုတာ တဒင်္ဂပါ။ ဒီရာထူး အာဏာစည်းစိမ်က လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ခဏတာရရှိတဲ့ အာဏာစည်းစိမ်ပေါ်မှာ ယစ်မူးသာယာမမိစေဖို့ သတိကပ်ကြပါ။ ကိုယ်အာဏာရှိနေတဲ့အချိန်၊ ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ဘေးမှာမြှောက်ပင့် ဖားယားနေတဲ့သူတွေ ပေါမှာပဲ။ ဒါတွေကို ကိုယ်ကသာယာပြီး လမ်းလွဲလိုက်သွားလို့ကတော့ ခံစရာရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ် တယောက်တည်း ခံရမှာပါပဲ။ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ အဆုံးသတ်က ဘယ်တော့မှ မကောင်းကြဘူး ဆိုတာ သိထားကြပါ။
လက်ရှိသမ္မတအသစ်ကလည်း အဂတိလိုက်စားမှုကို သေချာတိုက်ဖျက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မပါရအောင် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ကြပါတော့။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်စေပါနဲ့။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရသစ်အနေနဲ့လည်း အဂတိလိုက်စားမှု တကယ်အမြစ်ပြတ်အောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျောသားရင်သားမခွဲခြား အကြီးအငယ်မရွေး အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ကောက်ရိုးမီးသဖွယ် လုပ်နေလို့ကတော့ ဒီရောဂါဆိုးကြီးက ဘယ်တော့မှ ပပျောက်မည်မထင်ပါ။
နိဂုံးချုပ်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဟာ လူ့ဘ၀ကိုဝင်လာတုန်းကလည်း ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကလွဲပြီး ဘာမှမပါလာခဲ့ဘူး။ သေသွားတော့လည်း ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကလွဲပြီး အပ်တိုတချောင်းတောင် သယ်သွားလို့မရပါဘူး။ အဲဒီတော့ သံသရာမှာပါမယ့် အကုသိုလ်အတွက် သံသရာမပါမယ့် ငွေကြေးစည်းစိမ်နဲ့ ဘာလို့လဲကြမှာလဲ။ သူများအမှားကနေ သင်ခန်းစာယူကြပါ။ လွန်မှနောင်တရနေလို့ကတော့ အပိုပါပဲ။ ကျားသေရင် သားရေချန်ရတယ်။ လူသေရင် နာမည်ကျန်ရတယ်တဲ့။ ကောင်းမွန်တဲ့ နာမည်တလုံး လူ့လောက အလယ်မှာ ထာဝရစိုက်ထူနိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြပါလို့ အသိပေးပါရစေ။
နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျော အာဏာရှငျလကျအောကျကရြောကျခဲ့ရတဲ့ ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျဟာ ကဏ်ဍ ပေါငျးစုံအဘကျဘကျက နိမျ့ကယြိုယှငျးပကျြစီးခဲ့ရတယျ။ ထိုသို့ ပကျြစီးမှုထဲမှာမှအဆိုးဆုံးက ကြှနျတျော တို့ပွညျသူအမြားစုရဲ့ စိတျဓာတျတှေ ယိုယှငျးပကျြစီးကုနျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူဆိုတဲ့နရောမှာ အစိုးရ ၀နျထမျးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။ ကနျြတဲ့အရာဝတ်ထုပကျြစီးမှုတှကေ ပွနျပွငျလို့၊ ပွနျရှာလို့လှယျပမေဲ့ စိတျဓာတျတှပေကျြစီးမှုက ပွငျရတာ အခကျအခဲဆုံးပါပဲ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံဟာ အကငျြ့ပကျြလာဘျစားမှု ထိပျဆုံးနိုငျငံတှထေဲမှာ ယနအေ့ထိ နှဈပေါငျးမြားစှာရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁ရ ထုတျပွနျခကျြမှာ နိုငျငံပေါငျး ၁၈၀ နိုငျငံမှာ အဆငျ့ ၁၃၀ ရပျတညျလကျြရှိပါတယျ။ ခုထိ အနီရောငျအဆငျ့ထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ဒါတောငျ လြော့ကသြှားတာ ဖွဈပါတယျ။ စဉျးစားကွညျ့ရငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှအေလယျမှာ အတျောရှကျစရာကောငျးလှပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ရှကျရကောငျးမှနျး မသိကွသေးပါဘူး။ မသိလို့လညျး ဒီနအေ့ထိ အဂတိလိုကျစားမှုအဆိုးဆုံး နိုငျငံတှထေဲမှာ ပါနဆေဲဖွဈနတောပေါ့။
နှဈပေါငျးမြားစှာ အမွဈတှယျနတေဲ့ အဂတိလိုကျစားမှုဟာ အခြိနျကွာလာတော့ ရှကျစရာလို့တောငျမမွငျဘဲ အားကစြရာအဖွဈတောငျ ယနပွေ့ညျသူအမြားစုက မွငျလာတဲ့အထိ အခွအေနကေ ဆိုးလာခဲ့တယျ။ အမှားဟာအခြိနျကွာလာတော့ အမှနျလို့ထငျမွငျလာကွတယျ။ ဟုတျ၊ မဟုတျစဉျးစားကွညျ့ ဒီနေ့ လူငယျတယောကျအလုပျဝငျမယျဆိုရငျ ဘယျလိုဌာနမှာ ၀ငျခငျြကွလဲဆိုတာအဖွပေါပဲ။ လာဘျငှဘေေး ပေါကျအမြားဆုံးရတဲ့ဌာနကို ၀ငျခငျြကွတာပဲ။ ကြောငျးဆရာလုပျမလား၊ အကောကျအခှနျဌာနတို့ လဝကတို့ မှာ လုပျမလားဆိုရငျ ဘယျမှာလုပျခငျြတယျလို့ဖွမေလဲ။ အဲဒီလို လာဘျငှအေမြားအပွားရတဲ့ဌာနကို နရောရဖို့အတှကျ ငှသေိနျးပေါငျးမြားစှာပေးပွီးတောငျ ၀ငျကွရတယျ။ ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ဒီလို အကငျြ့ ပကျြလာဘျစားဖို့ကို အရှကျအကွောကျရှိဖို့ နနေသောသာ အားကစြရာအဖွဈတောငျ မွငျလာတဲ့လူမှု အဖှဲ့အစညျးတခု ဖွဈမှနျးမသိဖွဈလာကွတာဟာ တိုငျးပွညျအနာဂတျအတှကျ ရငျလေးစရာပဲဖွဈပါ တယျ။
ဒီနေ့ မိဘကလညျး ငါ့သားသမီးမဟုတျတာလုပျပွီး ငှရှောနကွေတာကို ဂုဏျယူတယျ၊ သူတို့ရှာတာကို စားဝံ့တယျ။ သွျော . . . ငါ့သားသမီးလေး ဒါမြိုးလုပျတာ မကောငျးဘူးဆိုပွီးမတားတဲ့အပွငျ အဲဒီလိုလုပျဖို့ အတှကျကို တှနျးပို့ပေးကွတယျ။ သားသမီးတှကေလညျး ငါ့မိဘက ဘယျလိုဌာနက ဘယျလိုရာထူးကွီး ဘယျလို ၀ငျငှကေောငျးတာဆိုပွီး ဂုဏျယူကွတယျ။ ငါ့မိဘက မဟုတျတာလုပျနတောဆိုပွီး ဘယျသားသမီးမှ ရှကျရကောငျးမှနျးမသိကွဘူး။ ပတျဝနျးကငျြလူမှုအဖှဲ့အစညျးကပါ လေးစားအားကနြတေော့ ဂုဏျယူစရာ ဖွဈနကွေတာပေါ့။ စဉျးစားကွညျ့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးအတှငျး ဘယျလောကျတောငျ စိတျဓာတျတှေ ပကျြပွားနကွေပွီလဲဆိုတာ။ မဟုတျတာ၊ မမှနျတာ လုပျရမှာကို ရှကျရ၊ ကွောကျရကောငျးမှနျး မသိတော့ဘူး။
ယနတေို့ငျးပွညျအဘကျဘကျက နိမျ့ကပြကျြစီး နတေဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျထဲမှာ ဒီအဂတိလိုကျစား မှုလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဒီနအေ့ရပျသားဒီမိုကရစေီ အစိုးရလကျထကျမှာတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာအမွဈ တှယျနတေဲ့အကငျြ့ဆိုး၊ စရိုကျဆိုးကွီးကို စတငျတိုကျဖကျြတော့မယျလို့ ကွှေးကွျောထားတယျ။ သမ်မတ သဈဦးဝငျးမွငျ့လကျထကျမှာပဲ ပထမဆုံးအကွီးဆုံး ငါးတကောငျကို ဖမျးပွလိုကျပွီ။ ညှနျခြုပျအဆငျ့ရှိတဲ့ လူကွီးတယောကျကို အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ တရားစှဲအရေးယူလိုကျပါပွီ။ ညှနျခြုပျဆိုတဲ့အဆငျ့က သူ့အထကျ ၀နျကွီးပဲ ရှိတော့တာပါ။ ဒါမြိုးအရေးယူပွမှုကို ကွိုဆိုရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၄ ရကျနကေ့ မန်တလေးတိုငျး တရားလှတျတျောမှာ အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ တရားစှဲခံရတဲ့ညှနျခြုပျကို ရုံးထုတျစဈဆေးခဲ့တယျ။ ရုံးထုတျလာတဲ့အခြိနျမှာ ထိုညှနျခြုပျဆိုတဲ့အရာရှိကို လကျထိတျခတျပွီး ရှကေ့ရဲက သံကွိုးဆှဲပွီးချေါလာတယျ။ မီဒီယာတှကေလညျး ဓာတျပုံတဖပျြတဖပျြရိုကျကွတယျ။ ထိုမွငျကှငျးကိုကွညျ့ပွီး အတျောစိတျမကောငျးဖွဈ တရားရမိတယျ။ သွျော . . . တခြိနျက ဘုရငျအလား အခွှအေရံတှနေဲ့ နခေဲ့တဲ့ အရာရှိတယောကျက ခုတော့ လကျထိတျကွီးနဲ့ သံကွိုးဆှဲချေါခံရတဲ့အဆငျ့ ဖွဈသှားပွီ။ နောကျနထှေ့ကျ သတငျးမီဒီယာမြားမှာလညျး မကျြနှာဖုံးသတငျးအဖွဈပါလာကွတယျ။ ယခု လိုပုံစံမြိုးပဲ ပွီးခဲ့တဲ့လ ဧပွီ ၂၆ ရကျနကေ့လညျး ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ ဒုဦးစီးမှူးတို့ကို အဂတိလိုကျစားမှုနှဈမှုအတှကျ ထောငျဒဏျ ၁၀ နှဈစီ အမိနျ့ခခြဲ့တာတှရေ့မှာပါ။
နိုငျငံတကာမှာကွညျ့ရငျလညျး တောငျကိုရီးယားသမ်မတပတျဂှမျဟီးကို အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ ထောငျဒဏျ ၂၄ နှဈခမြှတျလိုကျပါတယျ။ ထို့အတူ ဖိလဈပိုငျမှ သမ်မတအာယိုယို၊ ထိုငျးနိုငျငံမှ ရငျလတျတို့ဟာလညျး အဂတိလိုကျစားမှုမြားနဲ့ တရားစှဲဆိုခံထားကွရပါတယျ။ တောငျကိုရီးယားသမ်မတပတျဂှမျဟီးဆိုရငျ နခေငျြးညခငျြး သမ်မတဘဝမှ လကျထိတျနဲ့ တရားခံဘဝရောကျသှားပွီး သမ်မတအိမျတျောကနေ ဆငျးပေးလိုကျရတဲ့မွငျကှငျး၊ သူ့နိုငျငံသားတှမှေ ခကျြခငျြးနုတျထှကျပေးဖို့ တောငျးဆိုတဲ့မွငျကှငျး၊ ရုံးထုတျ လာတဲ့မွငျကှငျးတှကေ တရားကစြရာမွငျကှငျးတှပေါပဲ။
ကဲ စဉျးစားကွညျ့ရအောငျ ခုလိုအရာရှိအရာခံကွီးတှဘေဝကနေ ခကျြခငျြးတရားခံဘဝရောကျရှိ သှားရတာ သူတို့အနနေဲ့ ဘယျလောကျတောငျရှကျလိုကျမလဲ။ တရားခံရဲ့မိသားစုအနနေဲ့ ကိုယျ့ဖအေ တယောကျ ဒါမြိုးလကျထိတျကွီးနဲ့ သံကွိုးဆှဲချေါသှား တာကွညျ့ပွီး ဘယျလောကျရငျထုမနာ ခံစားလိုကျကွရမလဲ။
ဆှမြေိုးသားခငျြးတှရေော ဘယျလောကျအရှကျတရားရကွမလဲ။ အဂတိလိုကျစားတုနျးကတော့ ကိုယျ့ မိသားစုကောငျးစားရေး ကိုယျဆှမြေိုးကောငျးစားရေးအတှကျပါ။ ခုခံကွရတော့ ဘယျသူမှ လာကယျပေးလို့ မရတော့ဘူး၊ ဘယျသူမှလညျး ၀ငျခံပေးလို့ မရကွတော့ဘူး။ ခံစရာရှိတော့ ကိုယျတယောကျတညျး ခါးစညျးခံကွရတော့မှာပါ။ ဒါကလကျရှိဘဝမှာခံရတာ မစားသငျ့တာစား၊ မလုပျသငျ့တာလုပျခဲ့ကွတဲ့အတှကျ လညျး သပွေီးတဲ့နောကျပိုငျး သံသရာတလြှောကျခံကွရဦးမယျ။ သခြောစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျ တကယျ ကွောကျစရာကွီးပါ။
ဒီအဖွဈအပကျြကနေ ပွညျသူတှရေော အစိုးရ ၀နျထမျးတှရေော သငျခနျးစာယူကွရပါမယျ။ ကိုယျတိုငျ တှကွေုံ့ခဲ့တဲ့အဖွဈမှနျတခု ပွောပွပါဦးမယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈထဲက ၀နျကွီးဌာနတခုရဲ့ ခရိုငျအဆငျ့လူကွီးအပါ အဝငျ ၀နျထမျးမြားက တငျဒါကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မမှနျမကနျလုပျတယျ။ ဒါကိုခံရတဲ့သူတှကေ မကနြေပျလို့ ကြှနျတေျာ့ဆီလာအကူအညီတောငျးတယျ။ ဒါနဲ့ ကြှနျတျောကလညျး သကျသအေထောကျအထားနဲ့ ၀နျကွီး၊ ဒုဝနျကွီးဆီတိုငျကွားခိုငျးလိုကျတယျ။ နပွေညျတျောက စဈဆေးရေးအဖှဲ့စလှေတျပွီး စဈဆေးခိုငျးတော့ ဒီဝနျထမျးတှရေဲ့ မဟုတျတာလုပျတာပျေါခဲ့တယျ။ အနညျးဆုံးအလုပျပွုတျနဲ့ အမြားဆုံးထောငျကတြဲ့အထိ ခံကွရတော့မယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အဲဒီဝနျထမျးတှကေ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှမြေားဆီ အတငျးလာရောကျတောငျး ပနျကွတယျ။ သူတို့မိသားစုတှကေို သနားဖို့၊ တခြို့ကလညျး ပငျစငျနီးပွီ ပငျစငျယူရငျထုတျရမယျ့ ပငျစငျ ခြီးမွှငျ့ငှလေေးနဲ့ အိမျဆောကျရမှာမို့လို့ မလုပျပါနဲ့ အတငျးတောငျးပနျတယျ။ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျတေျာ့ မိတျဆှမြေားက သနားပွီး ကအြေေးကွောငျး လကျမှတျထိုးပေးလိုကရတယျ။
အဲတော့ဗြာ မလုပျခငျမှာ ဒီလိုလုပျရငျ ဒီလိုဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ ဘာလို့မစဉျးစားကွတာလဲ။ သူမြားတှလေညျး မဟုတျတာလုပျ နကွေတာပဲကှာ ဘာဖွဈလို့တုနျးဆိုပွီး ပွောလို့မရပါဘူး။ သူမြား ၁၀ ခါအမှားလုပျလို့ ဘာမှဖွဈ ခငျြမှဖွဈပမေဲ့ ကိုယျတခါလုပျမိတဲ့ အမှားလေးကလညျး ခုလိုဒုက်ခရောကျသှားနိုငျဆိုတာ သတိထားရပါမယျ။ ဘာမှမဖွဈရငျတော့ ဘာမှမဖွဈဘူးပေါ့။ ဖွဈလာခဲ့ရငျတော့ အဖလေညျး ကယျလို့မရ၊ အမလေညျး ကယျလို့မရ၊ သားသမီးလညျး ကယျလို့မရပါဘူး။ တကယျဖွဈတော့ ကိုတယောကျတညျးခံရတာ။ အသကျကွီးလို့ ဘုရားတရားလုပျရမယျ့အခြိနျမှာ ထောငျထဲမှာ အခြိနျကုနျသှားကွရတော့မယျ။
ဒါမြိုးတှဖွေဈမလာဖို့အတှကျ အစကတညျးက မိဘမြားအနနေဲ့လညျး ကိုယျ့သားသမီးဟာ တရားဝငျပေးတဲ့ လစာထကျပိုရနတေယျဆိုရငျ မလုပျဖို့သတိပေးရမယျ။ ငါ့သား ငါ့သမီး မဟုတျတာ၊ မမှနျတာလုပျပွီး ရှာကြှေးတဲ့ထမငျးတော့ ငါတို့မစားခငျြဘူးဆိုပွီး ပွတျပွတျသားသားပွောရမယျ။ သားသမီးတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျ့မိဘက မဟုတျတာလုပျနတေယျဆိုရငျ အဖေ၊ အမေ မဟုတျတာလုပျပွီးတော့ သားတို့၊ သမီးတို့ကို ရှာမကြှေးပါနဲ့ သမီးတို့ထမငျးကို ဆားနဲ့ပဲစားရစားရ စားပါ့မယျ။ ခုသူမြားတှအေဖမျးခံရတာကွညျ့ပါ၊ ဘယျလောကျရှကျစရာကောငျးသလဲ၊ အဖေ၊ အမတေို့အတှကျ လကျရှိဘဝမှာလညျး မကောငျးသလို သံသရာ မှာလညျး မကောငျးပါဘူးဆိုပွီး ပွတျပွတျသားသား တားမွဈရပါမယျ။ ဒါမှကိုယျ့မိဘ ကိုယျ့သားသမီးကို တကယျခဈြတယျလို့ ပွောလို့ရမှာပါ။ ကိုယျ့သားသမီး၊ ကိုယျ့မိဘမဟုတျတာလုပျပွီး ငှရှောနတေုနျးကတော့ တားမွဈရကောငျးမှနျးမသိ ပြျောပြျောပါးပါးစားသောကျကွပွီးတော့ ပွဿနာဖွဈ လကျထိတျတနျးလနျးနဲ့ အဖမျးခံရတော့မှ ရှကျလှပါပွီ မလုပျကွပါနဲ့။ နောငျတ မရကွပါနဲ့။
မိဘမဟုတျတာလုပျရငျ ကိုယျတငျမက သားသမီးမွေးမွဈတှအေတှကျ ခံရတယျဆိုတာ ဂဠုနျဦးစော အဖွဈအပကျြက ကြှနျတျောတို့နိုငျငံအတှကျအကောငျးဆုံးသငျခနျးစာကွီးပါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့အာဏာမကျမောမှု ကွောငျ့ မွနျမာအမြိုးသားခေါငျးဆောငျကွီးကို သတျလိုကျတဲ့အကြိုးဆကျက ကိုယျတိုငျလညျး ကွိုးစငျ တကျခဲ့ရသလို ကိုယျရဲ့သားသမီးတှသောမက သားသမီးတှကေ မှေးလာတဲ့မွေးမွဈတှအေထိ အာဇာနညျ နဆေို့ ကြောငျးမတကျရဲအောငျအထိ သမိုငျးတလြှောကျ အကြိုးဆကျက ကွောကျစရာပါ။
ထို့အတူ တိုငျးပွညျနဲ့ ပွညျသူ့အကြိုးအတှကျ ကိုယျကြိုးစှနျ့ အသကျစှနျ့ပေးဆပျခဲ့တဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနဲ့ အာဇာနညျခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ အကြိုးတရားဟာ ဘယျလောကျကွီးသလဲဆိုတော့ ယနအေ့ထိ အာဇာနညျနတေို့ငျး တတိုငျးပွညျလုံးက အလေးပွုနရေဆဲဖွဈတယျ။ မွနျမာနိုငျငံတညျရှိသရှေ့ သူတို့ဟာ ရှငျသနျနမှောပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးမွေးမွဈတှဟောလညျး ကိုယျ့ဖခငျ ကိုယျ့အဖိုးရဲ့ကောငျးမှနျ မှနျကနျတဲ့လုပျရပျတှရေဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို ဘယျလောကျခံစားနကွေရလဲဆိုတာ မွငျတှကွေ့မှာပါ။ တနိုငျငံလုံးကခဈြခငျလေးစားကွပွီး အမြားအလယျမှာ ကိုယျ့မိဘလုပျရပျကွောငျ့ ခေါငျးမော့ရငျကော့နိုငျခဲ့ ကွတယျ။
အဲဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးမြိုးဆကျအတှကျ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှခေနျြခဲ့ကွမှာလဲ။ ငါ့မိဘက ဘယျလိုကှဆိုပွီး လူပုံအလယျမှာ လကျမထောငျနိုငျစခေငျြလား။ ကိုယျ့မိဘ အဘိုးအဘှားလုပျရပျကွောငျ့ လူ့လောကအလယျမှာ ခေါငျးမဖျောရဲအောငျ ဖွဈစခေငျြသလား ဆုံးဖွတျကွပါ။ တကယျဖွဈလာရငျ တရားဥပဒကေရော၊ ကံတရားကရော၊ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးကပါ ခှငျ့မလှတျဘူး၊ မသနားကွဘူးဆိုတာ ရှမှေ့ာဖွဈတဲ့အမှုတှကေ သကျသပေါပဲ။ ရာထူးအာဏာရှိခြိနျမှာတော့ ပွညျသူကိုလညျး မငဲ့ကှကျ၊ တိုငျးပွညျအပျေါမှာလညျး မကွညျ့၊ ငါ့အတှကျ၊ ငါ့မိသားစုအတှကျ၊ ငါ့ဆှမြေိုး အသိုငျးအဝိုငျးအတှကျ အကြိုးတခုတညျးကွညျ့ ထငျရာ စိုငျးလုပျခငျြရာလုပျနကွေသူတှေ အထူးသတိထားကွပါ။
ရာထူး အာဏာ စညျးစိမျဆိုတာ တဒင်ျဂပါ။ ဒီရာထူး အာဏာစညျးစိမျက လူတှရေဲ့စိတျကိုပွောငျးလဲ ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ ခဏတာရရှိတဲ့ အာဏာစညျးစိမျပျေါမှာ ယဈမူးသာယာမမိစဖေို့ သတိကပျကွပါ။ ကိုယျအာဏာရှိနတေဲ့အခြိနျ၊ ခမျြးသာနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ကိုယျ့ဘေးမှာမွှောကျပငျ့ ဖားယားနတေဲ့သူတှေ ပေါမှာပဲ။ ဒါတှကေို ကိုယျကသာယာပွီး လမျးလှဲလိုကျသှားလို့ကတော့ ခံစရာရှိတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကိုယျ တယောကျတညျး ခံရမှာပါပဲ။ မဟုတျတာလုပျတဲ့သူတှရေဲ့ အဆုံးသတျက ဘယျတော့မှ မကောငျးကွဘူး ဆိုတာ သိထားကွပါ။
လကျရှိသမ်မတအသဈကလညျး အဂတိလိုကျစားမှုကို သခြောတိုကျဖကျြမယျလို့ ကွှေးကွျောထားတယျ။ အဲဒီတော့ ကိုယျမပါရအောငျ မှနျကနျစှာလုပျဆောငျကွပါတော့။ ဘယျသူတရားပကျြပကျြ ကိုယျမပကျြစပေါနဲ့။ ဒီနရောမှာ အစိုးရသဈအနနေဲ့လညျး အဂတိလိုကျစားမှု တကယျအမွဈပွတျအောငျ လုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကြောသားရငျသားမခှဲခွား အကွီးအငယျမရှေး အရေးယူဆောငျရှကျကွဖို့လိုပါတယျ။ ကောကျရိုးမီးသဖှယျ လုပျနလေို့ကတော့ ဒီရောဂါဆိုးကွီးက ဘယျတော့မှ ပပြောကျမညျမထငျပါ။
နိဂုံးခြုပျပွောခငျြတာက ကြှနျတျောတို့ဟာ လူ့ဘဝကိုဝငျလာတုနျးကလညျး ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျကလှဲပွီး ဘာမှမပါလာခဲ့ဘူး။ သသှေားတော့လညျး ကုသိုလျ အကုသိုလျကလှဲပွီး အပျတိုတခြောငျးတောငျ သယျသှားလို့မရပါဘူး။ အဲဒီတော့ သံသရာမှာပါမယျ့ အကုသိုလျအတှကျ သံသရာမပါမယျ့ ငှကွေေးစညျးစိမျနဲ့ ဘာလို့လဲကွမှာလဲ။ သူမြားအမှားကနေ သငျခနျးစာယူကွပါ။ လှနျမှနောငျတရနလေို့ကတော့ အပိုပါပဲ။ ကြားသရေငျ သားရခေနျြရတယျ။ လူသရေငျ နာမညျကနျြရတယျတဲ့။ ကောငျးမှနျတဲ့ နာမညျတလုံး လူ့လောက အလယျမှာ ထာဝရစိုကျထူနိုငျဖို့ ကောငျးမှနျစှာ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးကွပါလို့ အသိပေးပါရစေ။
ကျောင်းဆရာမကို ရက်ရက်စက်စက်ထိုးသတ်တဲ့ တရားခံလွတ်မြောက်နေပြီး တွေ့ရှိပါက (သို့) သတင်းရပါက ဆက်သွယ်ပေးကြပါ
ဇနီးမယား ၇ မျိုး
PREVIOUS POST Previous post: အဖျားလုံးဝမကျဘဲ ကလေးမှိန်းနေပြီး ကော်ဖီရောင်အန်ခြင်း၊ ဝမ်းအမည်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးပြရန် လို
NEXT POST Next post: ကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုပြီး မလာစေချင်ပါ